Madaxweyne Obama oo ka hadlay weerarkii South Caroline - BBC Somali
Madaxweyne Obama oo ka hadlay weerarkii South Caroline
Image caption Kaniisadii Charlestone
Midab takoorka ayaa ah caabuq bulshada ku dhex jira ayuu yiri madaxweyne Obama, iyadoo dhawaan ay ahayd markii 9 qof oo afrikaanka Maraykanka ah lagu dilay kaniisad ku taalla South Carolina.
Booliska ayaa kiiska dilalka ka dhacay Charleston habeennimadii arbacadii ula dhaqmaya dambi nacayb ku salaysan.
Goor sii horreysay ayaa Dylann Roof oo ah 21 jir waxaa la hor keenay maxkamad, isagoo wajahaya 9 eedeymood oo dil ah.
Kama aysan muuqan wax jixinjix ah, ayadoo qaraabadii dadka la dilay ay toos ula hadlayeen. Waan ku cafinayaa ayuu yiri mid ka mid ah dadkaas oo gabadhiisa uu dilay, isagoo ay illin ka socoto.
Madaxweyne Obama wuxuu magaalada San Francisco ka sheegay in sababaha ninkaas dhallinyarada ku xambaaray dilka ay dib noo xusuusinayaan in midab takoor uu weli jiro, oo ay tahay in si wadajir ah loo wajaho. Marka ay taasi sumaynayso garaadka dadka dhallinyarada ah, waxay khiyaano ama dhabarjab ku tahay buu yiri qiyamkeenna, waxayna kala jaraysaa buu yiri dimoqaraadiyadeena.
Laakin madaxweynuhu wuxuu amaanay qoysaskii dadka laga dilay ee muujiyey cafiska.
Madaxweyne Obama wuxuu ku baaqay dood hor leh oo laga yeesho xakamaynta hubka, wuxuuna ku riixay Congress-ka inay raacaan fikradda dadweynaha.
Meel kubbadda lagu ciyaaro oo ku taalla Charleston ayey kumanaan qof isugu yimaadeen fiidnimadii Jimcaha, ayagoo halkaa ugu duceeyey dadkii la dilay. Gacmaha ayey is qabsadeen waxayna ku heeseen waan ka guulaysan doonnaa.
Joseph Riley oo dadkaas ka mid ah wuxuu yiri qof nacayb ka buuxo ayaa bulshadan la soo dhex galay fikrado waalli ah si uu u kala qaybiyo, laakin waxa kaliya ee uu sameeyey ayaa ahayd buu yiri inuu na mideeyey oo uu naga dhigay kuwo aad isu sii jeclaada.